Iplate yeAluminiyam etyheliweyo
Inkqubo yeAluminiyam eyandisiweyo
ngu admin nge-20-01-16
Itekhnoloji yojoliso yeprofayile ye-aluminium eyongezelelweyo. Ukulungiswa kweprofayili ze-aluminium ezikhutshelweyo. Iiprofayili zeAluminiyam ziyanyibilika kwaye zigqithiselwe ukufumana iinxalenye ezahlukeneyo ze-aluminium.Inqubo yokuvelisa iiprofayili ze-aluminium ikakhulu ineenkqubo ezi-3. zezi: Ukuphosa → ukuLolonga → Ukwenza imibala. ...
Ukusetyenziswa kwealuminium emzimbeni
IAluminiyam iyeyona nto ilungileyo kwabanye abenzi beemoto. Iimoto ezinemizimba yealuminium zinamandla amakhulu okuphucula uqoqosho lwamafutha, ukumelana nefuthe kunye nokuphatha. Uninzi lwee-automaker kwihlabathi liphela lubona ikamva lemizimba yealuminium kwaye likholelwa ukuba le nto iza kukhuthaza ukwenziwa ...
Ulwazi oluncinci malunga ne-aluminium
ngu admin nge-20-01-07
Iinyani ze-luminum zikunika ulwazi malunga nezinto zendalo ezisetyenziswa kwiindidi ezininzi zamashishini. IAluminiyam ithathwa njengezinto ezipholileyo. Yinto yanamhla, inciphile, yomelele kwaye ithambile. Ungayifumana i-aluminium esetyenziselwa ukwenza i-can, ibhotile kunye nezinye iimveliso ezininzi. Nazi iinyani ezinomdla malunga ne-aluminium ...
esemgangathweni kuqala. Iimveliso zethu zifumene udumo oluhle kushishino kunye nokuxabiseka phakathi kwabathengi abatsha nabadala ..
Inombolo yomnxeba: 0086-18952178587
Ipaki ye-Metallological Casting Industry Park, iJing'an Idolophu, i-Pei County, Xuzhou, China